Xaaladdii ugu adkeyd oo ka taagan Degmada Ceelwaaq (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xaaladdii ugu adkeyd oo ka taagan Degmada Ceelwaaq (SAWIRRO)
Xaaladdii ugu adkeyd oo ka taagan Degmada Ceelwaaq (SAWIRRO)
Wararka ayaa sheegaya inay gurayn ceelashii biyaha iyo warihii ay dadka iyo duunyaba ka cabi jireen, halkaa oo sidoo kale aanu wax daaq ahi ka jirin, maadaama labadii xilli roobeed ee ugu dambeysay aanay wax roob ahi ka da’in Ceelwaaq iyo nawaaxigeeda. Abaarta ayaa sidoo kale laga soo sheegaya deegaano kale oo gobolkaasi ka tirsan.
Gudoomiyaha Degmada Ceelwaaq, Ibraahim Aadan Guuleed ayaa sheegay in abaaraha ba’an ee halkaasi ka jira ay dhibaato weyn u gaysteen dadka iyo duunyada. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in abaaruhu ka dhasheen roobabkii la filaayay oo aan halkaasi ka da’in.
“Abaaro ba’an baa ka jira deegaanka oo dhibaato weyn u gaystay dadka iyo xoolaha, intaba. Sanadkii hore roobab lama helin, deyrtii hadda ahaydna roob lama helin. Marka sidaasi darteed abaaro ba’an baa deegaanka ka jira.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo la hadlay BBC.
Su’aal ahayd deegaanadee ugu badan bay abaartu saameysay ayaa wuxuu sheegay in Gobolka Gedo oo dhan ay abaartu ka jirto, balse ay saamayn ugu weyn ku yeelatay Ceelwaaq iyo deegaanada hoostagga.
“Ceelwaaq iyo nawaaxigeeda oo dhan weeye, Gobolka Gedo way ka jirtaa, laakiin aagga Ceelwaaq ee anaga aan ku suganahay ayay u badan tahay abaarta.” Ayuu yiri Gudoomiyuhu.
Gudoomiyaha ayaa yiri “Aagga Ceelwaaq goob beeraley maaha, waa aag xoolo dhaqato, xoolahaa lagu noolyahay, xoolihiina haddii roobab aysan da’in oo baadba aan la helin noloshii dadka khatar bay galeysaa, xoolihiina waaba ka sii daran yahay.”
“Waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago dal iyo dibadba abaar masiibo ah, oo oon, macluul iyo caafimaad-darraba sidato in ay ka jirto Gobolka Gedo. Waxaanu dooneynaa inaanu ummadda Soomaaliyeed iyo dowladooduba la wadaagno Gobolka Gedo inay ka dhacday abaar daran.” Ayuu yiri Aadan Rufle oo Warbaahinta la hadlay.
Previous articleDadka qaba COVID-19 oo buux-dhaafshay isbitaalada Muqdisho
Next articleWararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay Degmada Hodan